Hawraar magaceed - Wikipedia
Hawraar magaceed waa hawraar xoogga saarta magaca oo su'aal iyo jawaabba magaca siisa, dhisme ahaan waxa ay ka koobantahay laba qaybood waana: su'aal iyo jawaab ama magac iyo war.
Xiriirka ka dhexeeya labada qaybood ee hawraar magaceedda waa xiriir ku dhisan, magac qodob, iyo war sheeko ku saabsan qodobka. Sida: Innanka ayaa taga dugsiga (magac + war), Gabadh baa raacda geela (magac iyo war)
Hawraaraha aan soo aragnay waa hawraaro mudnaanta siinaya magaca. Si aynnu taa u caddayno hadda ba, aynnu is weydiinno su'aalahaan soo socda: Ku ma ayaa taga dugsiga? iyo ma inanka ayaa taga dugsiga? S'aalahani waxa ay saaran yihiin magacyada hoos ka xarriiqan ee Ku iyo inanka bal aad u eeg ereyga su'aasha ee ma, magacyada inanka iyo ku ayaa su'aaluhu saaran yihiin.
Bal su,aalihii jawaabaha aynu eegno:
Inanka ayaa taga dugsiga.
Haa. Gabadh baa raacda geela.
Jawaabahaan magacyada inanka i yo gabadh baa carrabka lagu xajinayaa. Su'aalahoodana waxa lagu raadinayaa cidda tagta dugsiga iyo cidda geela raacda. Falalka tegidda iyo raacidda, waxba la is ka ma weydiinayo.
sidaa awgeed, hawraar magaceeddu waa hawraar magacu mudan yahay, su'aal iyo jawaab ba. Waxa la is weydiinayo ama laga jawaabayo ayaa ah wax magaca oo keli ah khuseeya ama ku saabsan.
Xogta iyo tixraacaEdit
↑ (buugga sharraxaadda naxwaha ee ee hawraar magaceed) bogga 11aad.
Eeg sidoo kaleEdit
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Hawraar_magaceed&oldid=167571"
Last edited on 23 Maarso 2017, at 12:47
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Maarso 2017, marka ee eheed 12:47.